Tartar - kuyini? Kwamanye - a okukhulu isidlo esikhulu, uzilungiselele ngesisekelo yenkomo noma inhlanzi, abanye - sauce olubucayi ukuthi uphelele ukushaja amasaladi amaningi. Kufanele kube ujwayelene zonke izinketho, bese ungakwazi bese uyanquma ukuthi ikuphi-ke ukuthi lokhu dish.
Kuthiwa umbono ukudla inyama eluhlaza, tartare, kungokwalabo ngokuphelele abayimizulane, okuyilezi: AmaTatar. Ngokwengxenye lokhu kuyiqiniso, kodwa isayensi yesimanje Culinary uyazicabangela isidlo okukhulunywe severofrantsuzskim amasiko.
tartare Ngakho Iberia - kuyini? Uma labapheki ithemba ngokugcwele lokuphekiwe elite, lena Yiqiniso omkhulu main, okuyinto Yenziwe ithenda yenkomo kanye inyama yenkonyana kangcono.
Ukuze lokho kuzodinga 900 amagremu umucu inyama yenkonyana okungcono, amaqanda amane, soy noma usoso uorchersky, anyanisi, anamanci mahlanu amagremu of gherkins pickled , futhi condiments.
Le nqubo nokulungiselela elula futhi esheshayo. Isinyathelo sokuqala siwukuba ukucubungula inyama: ukususa amafutha uphinde ususe imithambo uma ngabe zikhona. Khona-ke ukushintsha wonke ucezu ku yenkomo, ungakhohlwa ukuze ungeze spice. Ngaphezu kwalokho, besebenzisa ukuma ezine cylindrical ngaphandle phansi, wasibeka phezu ipuleti ngendlela ukuthola "kegs" engajulile. Bathulula ucezu isikhuphasha, okuyinto kanje ngemuva afafazwe nenye anyanisi oqoshiwe futhi gherkins. Khona-ke ukususa ngokucophelela isikhunta futhi ngokuphepha fed itafula nge izinkomishi, okuyinto sauce.
Inhlanzi tartare - kuyini? Yiqiniso, kulapho ithenda isidlo, eklanyelwe ukwanelisa ukunambitheka labo ungathandi ukudla inyama eluhlaza. Enye kulokhu ukhonza njengomdala inhlanzi eyomisiwe enosawoti, kodwa ingasetshenziswa kanye nezinye izinhlobo zezinhlanzi.
Ngakho, ukulungiswa izinhlanzi tartare isidingo: herring umucu, ukwatapheya, ulethisi, Bun, lemon, upelepele, garlic, shallots, Mint noma basil amahlamvu namafutha omnqumo.
Inqubo ekudalweni kwendoda nowesifazane tartare simiswe ngalendlela lelandzelako: ngokujulile umthamo kufanele bahlanganise ukwatapheya, ngawakhamela it in juice lemon nengxenye futhi inkathi ngamafutha omnqumo. Anyanisi, inhlanzi no-pepper-Chili Imi phakathi obujwayelekile cubes bese uthumela ku ukwatapheya. Salad kumele aphambane izandla zakhe zibe emapheshana ezibanzi ke uhlanganise kahle ukudla kakade walungisa.
On ipuleti ukubeka umumo cylindrical ngaphandle phansi, uma sikubeka ingxube okuholela, futhi ngobumnene ukususa ukwesekwa ukuhlobisa tincetu lemon noma Mint amaqabunga basil.
Izithombe we izitsha ehlotshiswe okungcono amaqoqo Culinary, ukuthi kuyafaneleka. Amazing game of ukunambitheka ababayo, okubabayo futhi amnandi kwenza kube kwalokho ephelele ukuze amasaladi amaningi, izinhlanzi ngisho inyama.
Ngakho, ukulungiselela okuzenzela tartar sauce udinga: ezimbili wezipuni Capers, ukhilimu omuncu aqotshwe gherkins zifakwe emanzini anosawoti, isipuni kalamula Dijon lwesinaphi, isipuni oqoshiwe dill fresh, 150 ml amafutha, a engahluziwe ezimbili okuphekiwe isikhuphasha, kanye usawoti kanye pepper.
Dala njengomsebenzi wobuciko encane kanje. Ngu fake yashizi izikhupha abilisiwe kunezelwa eluhlaza, lwesinaphi juice. Ngosizo mixer uphehle kahle. Khona-ke kancane kancane amafutha omnqumo, kulokhu ibangele phehla kuze ancibilikisa. Ngokulandelayo, ukubeka izithako asele futhi kushintshwe kuze ukungaguquguquki iyunifomu alube. Sauce okulungiselelwe.
It kuvela ukuthi impendulo yombuzo othi: "Tartar - kuyini lokho?" - ngokusobala okuyinto engenakwenzeka ngoba isidlo ngakho abaningi emaceleni.
Couscous Engaqondakali Kuyini lokhu isidlo?
Papua New Guinea - epharadesi emhlabeni
Usizo yonyaka wesabatha
Amagilebhisi kulolo ketshezi: zokupheka